Ibsa Qeerroo Bilisumaa Oromoo Godina Wallaggaa bahaa irraa kenname – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooIbsa Qeerroo Bilisumaa Oromoo Godina Wallaggaa bahaa irraa kenname
Ibsa Qeerroo Bilisumaa Oromoo Godina Wallaggaa bahaa irraa kenname.
(Dhimmoota Filannoon wal qabatee Sirni Shiftaa PP ittiin Uummata keenya burjaajessu wareegama barbaadamu kamuu baasnee ni fashalsina.)
Akkuma beekamu Oromoon erga Gabrummaatti kufee Impaayera jala galee as rakkoo fi gadadoo hedduu keessummeessaa har’a ga’eera. Sirnooti gita bittootaa itti wal jijjiiraa, Hayyuu Oromoo, Dargageessaa fi Dargaggeettii, Maanguddoo fi ijoollee ol adeemoo hedduu nyaatee hadhaa gabrummaa Uummata Oromoo dhandhamsiiseera. Kun hundi waan seenaa irraa dhageenye qofa miti, qabatamaatti namni taatee har’aa argaa jiru, Gabrummaan gaafa Oromoon cabee eegaltee waan isheen Oromoo godhaa har’a geesse namuu tilmaamuu danda’a.
Oromoon garuu akkuma cabee gabroomeen Gabrummaa ho’ifatee galee taa’ee hin beeku, Atseewwan darbanii eegalee, haga Sirna EPRDF caasaa bulchiinsan of labsutti mormaa, wareegama baasaa bakka har’a jiru kana ga’e. Qabsoo kana keessattis Jaarmayaan hogganamee, qabsoo yeroon gaafattu godhaa injifannoolee mul’achuu danda’an galmeessaa har’a ga’e. Ta’us har’as qabsoon Uummatichaa Maniisaa ga’ee gudunfaa hin arganne. Kanaaf ammoo Oromoon guutuun karaa mirga isaa deeffachuu danda’uun hiriiree falmaa hadhooftuutti jira.
Addatti Qeerroon Bilisummaa Oromoo kaleessa aarsaa jabaa baasaa ture har’as sirna TPLFrraa suphee of baaseen akka farra nageenyaatti ilaalamee Qabsoo yeroon gaafattu godhee Qabsoo sabichaatti xumura tolchuuf falmatti jira.
Mootummaa jedhee murni caccabaan of waamu PPn amma filannoo Oromoo tuffachiisee, lafaa fi qe’ee Oromoo alagaaf kennu gaggeessuuf guyyoota qubaan lakkaawamantu hafaa jira.
Kana irratti Qeerroon Bilisummaa akka Godina keenyaatti ejjennoo kanaa gadii baafatee hadheeffatee gocha burjaajii Oromoo irratti deemu balaleffata.
Filannoon Dhaaboliin Oromoo irraa qooda fudhachuu dhorkaman qe’ee Oromoo irratti adeemsifamuun tuffii fi sabichi homaa gochuu hin danda’u jedhamee waan karoorfameef nuti Qeerroon waan dandeenyuun dura dhaabbanna.
Uummati keenya haga ammaa shira kana hin hubatin jirtan hubattanii akka irraa qooda hin fudhanneefi Filannoon fakkeessii kun akka hin geggeeffamne ga’ee keessan akka baatan hubachiisna.
Namni maal na dhibdeedhaan akeekkachiisa kanarra darbee adeemu kamuu rakkoo isa mudachuu maluuf gaafatama akka fudhatu hubachiisna.
Namoonni beekaa akka Uummati keenya burjaaja’uuf Filannoo kijibaa kanaaf Uummata keenya hiriirsaa jirtan, gaafatama Seeraas ta’u Seenaa jala akka jirtan, yeroo kanatti daba Uummata keenyarratti hojjetaa akka jirtan hubattanii akka irraa dhaabbattan.
Qaama Filannoo kana tumsu kamirrattiyyuu Tarkaanfiin hojii isaa madaalu akka kennamuuf hubachiisaa.
Maayii irratti Qaamni kam guyyaa filannoo jedhamu kana Bakka Buufata Filannoo jedhamu sanarraa yoo of fageesse gaarummaa ni qaba.
Uummati yoomiyyuu injifataadha, daba seenaa hojjechuurraa of baraaruun yeroon isaa amma.
Waxabajjii 18, 2021.
Naqamte , Oromiyaa
Qeerroo WBOf ittii mudii qeerroo bilisumaa oromoo ololtuuf gantuuf guraa inkeeninuu yoomu!!!!! Amajii tokko guyyaa…